Asbuuca labaad Jir - Somali Kidshealth
Asbuuca labaad Jir
27/05/2013 by admin
Ilmuhu marka uu gaaro asbuuca labaad waxaa muhiim ah dhamaan dhaq-dhaqaaqa dabiiciga ah. Dhallaanku waxay ku mashquulsan yihiin naas-nuugista, wax-qabsashada, raadinta meesha uu ka jiro naaska hooyadiis iyo il-libiqsiga.
Carruurtu waxay daawanayaan wajiyada waalidkood marka dhabta la saaro, waxay u baahan yihiin iyana in la daawado wajiyadooda, loo dhoolo-cadeeyo oo madaxa si waafaqaad ah loogu ruxo.
Ilmaha jira labo asbuuc waxay kala ogaan karaan urta hooyadood, waxay dareemi karaan dhadhanka macaanka, qaraarka iyo xaamuda.
Haddii ilmuhu u muuqdo mid si xiriir ah u ooyaya saacado badan waxaa laga yaabaa in ilmahaasi dareemayo callool majiir(Colic). Carruurta da’daan ah 20% ayaa callool-majiirku helaa. Asbuucyadaan ilmuhu wuu la sii ooyi doonaa callool majiirka, laakiin ha welwelin si dabiici ah ayuu ku dhamaanayaa callool-majiirku.
labo asbuuc oo xiriir ah oo naas-nuujin ah hooyooyinku waxaa laga yaabaa inay doonayaan inay ku noqdaan cunista cunnooyinkii ay jeclaayeen. Hooyadu way cuni kartaa cunto kasta oo nafaqo u leh, laakiin waxaa fiican in laga taxadaro cuntooyin caanaha naaska u gudba oo ilmaha qaar ku keena callool-majiir iyo ladiidyo. Waxaa ka mid ah cuntooyinkaas cuntooyinka caanaha laga sameeyo sida farmaajada, basasha, toonta,kaabajka digirta, iyo kiimikooyinka suugada lagu carfiyo.
Yaree qaadashada kafeega iyo shaaha, waayo waxaa laga yaabaa in caanaha naasaha u gudbaan oo qaar ilmaha ka mid ahi dhibsadaan ama uu hurdo yaraan ku keeno
Jooji ama is-dhaafi welwelka waayo waxaa laga yaabaa in uu qaldo jidwalka naas-nuujintaada. booqo dhaqtarkaaga ama umulisadaada haddii welwel ama stress aad dareemayso
Isku day inaad guriga bannaanka uga baxdo oo la kulan hooyooyinka kale si aad khabaar uga hesho ku saabsan ilmo korinta.
Dhiiggii umulnimada asbuucaan wuu madoobaanayaa marka hooyadu naaska nuujinaysana wuu soo burqanayaa, waayo ilmo-galeenka ayaa ururaya marka naasaha caanuhu ku soo dhacayaan. haddii dhiiggu saafi yahay ama dhiig-bax badani jiro la xiriir dhaqtarkaaga ama umulisadaada.
Posted in Heerarka Korriinka
PrevMaalinta koowaad ilaa Asbuuca koowaad
next3 asbuuc jir